Naanị ihe dọkịta ahụ nyere n'iwu? | Martech Zone
Na ngwụcha izu a gara aga, enwere m ọmarịcha njem azụmahịa / njem onwe m ruo Victoria na Vancouver, British Columbia. M gụsịrị akwụkwọ na High School na Vancouver afọ 20 gara aga ma laghachi na ugboro abụọ. Ọ bụ ihe ịrịba obodo - dị ọcha, mara mma, oge a na ike. M nọrọ ụfọdụ ezigbo enyi m si High School na anyị ọbụna nwetara 9 oghere nke golf na. Ọ bụ a na-akpali akpali izu ụka! (Na azụmahịa ahụ gara nke ọma!)
Achọpụtara m ihe ole na ole mgbe m nọ ebe ahụ. Otu n’ime ha bụ enweghị ọtụtụ ibu. Kwụsị iche dị ka ọ pụrụ iyi, ọ bụ naanị mmadụ ole na ole (abụ m otu n'ime ha). Echere m n'ezie enwere ikuku ka mma maka ahụike na Vancouver. Ije ije na-ahụkarị ebe ọ bụ na e nwere ụlọ ahịa na ụlọ ahịa ndị dị nso ụlọ. Anyi nọ otu abalị na Satọde wee jee ije site na ebe ruo ebe (ike gwụrụ m, yabụ enwetara m tagzi otu oge!)
Ihe ọzọ m chọpụtara bụ mmetụta nlekọta ahụike mba nwere na obere azụmaahịa na azụmaahịa achụmnta ego. Enweghị egwu ịhapụ ọrụ gị iji bido azụmaahịa gị ebe ahụ. Ọ bụ ihe dị m mkpa dịka nna m na-alụbeghị di. Ọ bụ ezie na abụghị m onye na-akwado ndị ọrụ gọọmentị nke ọgwụ mba na ihe ndị ọzọ agbakwunyere na-adịghị mma, ekwenyere m na enwere ike ịnweta usoro obi ụtọ.
Ọ ga-amasị m ịhụ mmetụta nke ịchụ nta ego na azụmaahịa obere azụmaahịa so na mkparịta ụka na United States. Ikekwe anyị nwere ike ịchọta onye nwere obi ụtọ, ebe gọọmentị na-enyere aka n'ịgwọ ọrịa obere azụmahịa maka afọ mbụ. Anyị kwesịrị ịkwado 'mkpuchi' mkpuchi nke na-ewere site na azụmaahịa na azụmaahịa na otu onye n'otu n'otu.
Ekwesịrị iji ụgwọ dị ala kwụọ ụgwọ ahụike dị ka ụgwọ dị mma nke ịnya mkpuchi ụgbọ ala. Ikekwe a ga - agbakwunye ego nke 'Ahụike Ahụike' na ego mkpuchi anyị ugbu a nke ga-ekpuchi anyị n'oge enweghị ọrụ ma ọ bụ na mmalite nke obere azụmaahịa.
Adịghị m akwado maka ọgwụgwọ mba. Ekwenyere m na ọ bụrụ na ịchọrọ ịhụ azụmahịa ọ bụla na-agba ọsọ nke ọma, nyefee ya n'aka gọọmentị ime! Mana nnwere onwe pụọ n'egwu na uru agaghị efunahụ na-egbochi mmụọ ịchụ nta azụmaahịa ebe a na United States.
Ndị folks kwesịrị ịtọhapụ ịmalite obere azụmaahịa na-enweghị atụ ụjọ ịhapụ mkpuchi ahụike ha!
Tags: ahụike Canadamkpuchi ahụikenlekọta ahụikeotu onye na-akwụ ụgwọ
Dee 26, 2007 na 10: 40 AM
Ahuru m na achoputara aza ajuju m gbara na uzo ozo.
M 100% megide ọchịchị efehe ihe ọ bụla…
Enwere ihe kpatara ndị si na Canada na-akwọga ndịda maka nlekọta ahụike.
M nọnyeere gị na gọọmentị… ọ bụrụ n'ịchọrọ ịkwanye otu ụlọ ọrụ n'ime ala, tinye ya n'okpuru ọchịchị gọọmentị. Nke ahụ kwuru na, Ahụike Universalwa niile ekwesịghị ka ndị gọọmentị na-agba ọsọ 100%, n'agbanyeghị, dị ka ọ dị na Canada.
Ekwenyere m na ọ nwere ike ịbụ nkeonwe ma bụrụ nke ụwa niile. Ọ bụrụ na mmadụ chọrọ ịkwụ ụgwọ n'akpa (dị ka ndị Canada na-abịa South), gịnị ma ị hapụ ha?